Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014*
Ibsuuf: Gosti afoolaa tokko tokko, fakkeenyaaf oduu durii, gaaffilee bu’uura ta’an kan sammuu namoota naannoo murtaawaa (kkeessumattuu daa’imman) jiraatanuuf deebii kennuuf yaalu kan akka jaaffilee namaa, mukaa, bineensa, kkf maaltu uume jedhaniif debii laatu. Oduuwwan ykn sheekkowwan madda waantotaa ibsuudhaaf yaalanu kaayyoo isaaniitiif bifa seera qabeessa uumuu yaalu. Saboota addaa addaa biratti himni tokko ykn waanti tokko haala adda addaatiin uumaa ta’ee dhiyaata. Faallaan uumaa (creater) kanaa karaa tokkoon yoo jiraatu, deeggartoonni isaa ammoo karaa biraatiin nijiraatu. Waan bifaanis ta’e qabiyyeedhaan hubannoof rakkisaa ta’ee argameef ykn uumama sodaachisaa itti ta’eef dhalli namaa haala kanaan bifaafi hiika kennaaf jechuudha. Yoo kan godhu hanga tokko naannoo isaa sirna qabsiisa; sammuun isaas hanga tokko boqonnaa argata.
Cimsuuf: Sadarkaa beekumsaa yeroon haayyameef irratti hundaa’ee ofis ta’e naannoo isaa ibsuuf ykn hubachuuf akkuma yaalii godhu, ibsaafi hubannoo isaa kana hordofee dhaabbileefi aadaalee isaa afoolaadhaan cimsa ykn gad-dhaaba. Guyyaa dhalootatii eegalee hanga du’a isaatti gochaalee raawwachuu qabu, maaliif akka raawwachuu qabu, amansiisa. Gochaaleen hawaasaa kunis akka hinbadneef; akka dhaloota itti aanu keessattis itti-fufanu taasisu hawaasa barnoota hammayyaa hinqabne (katabuufi dubbisuu hindandeenye) keessatti dalagaaleen raawwatanu, fakkeenyaaf, kanneen dhaloota, dhaqna qabaa, fuudhaafi heeruma, gootummaa, du’a, kkf waliin hariiroo qabanu akka itti fufanu gochuun kan danda’amu afoolatti fayyadamuudhaan ta’a. Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha.
To’achuu: Gosooti afoolaa mala ykn tooftaa jireenyaatiifi amala gaarii barsiisanu, amaloonni hawaasa biratti jibbamanu akka hin babal’annes to’achuu nidanda’u. Hattuummaan, sobuun, doqnummaan, garaa-jabummaan, kkf amala gadhee ta’uu ibsu: Akka miseensonni hawaasaa irraa of-eeggatanu akeekkachiisu; nito’atu. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.
* Beekan Gulummaa karaa email: beekangulummaairranaa@gmail.com qunnamuun ni danda’ama.